Wararka - Faa'iidooyinka dalabka aluminium gaas
Faa'iidooyinka Codsiga ee Goomaatada Aluminium Aluminium
Goomaha aluminium ee aluminiumku wuxuu ka samaysan yahay aluminium ka dib marka la riixo ka dibna loo sameeyo iyadoo loo eegayo ujeedooyin kala duwan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha wax soo saarka qaarkood si loo kala saaro hawada loona kordhiyo nolosha alaabada. Marka maxay yihiin faa'iidooyinka aluminium aluminium ah? ?
Ugu horreyntii, aluminiumka aluminiumku waa mid aan sun ahayn oo aan dhadhan lahayn gobolkan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay awood bakteeriyada wanaagsan. Guud ahaan marka laga hadlayo, sheyga noolaha ah kuma kori karo, marka dushiisa waa nadiif iyo faa iidooyin kale, sidaas darteed badanaa waxaa loogu isticmaalaa cuntada. Baakadaha; dhanka kale, aluminiumka aluminium gaas sidoo kale waa madmadow, sidaa darteed waxay leedahay saameyn wanaagsan oo difaac ah oo ku saabsan alaabada xasaasiga u ah qorraxda; intaas oo kaliya maahan, sidoo kale waxay aad muhiim ugu tahay furitaankeeda fudud markii loo adeegsado baakadaha wax soo saarka. Iyo xooggeeda yar ayaa sidoo kale aad ugu habboonaan kara macaamiisha inay furaan; markaa waa shay tayo sare leh oo wax lagu soo rido oo isku daraya quruxda, waxqabadka, iyo sahlanaanta isticmaalka.
Qalabka aluminium ee aluminiumku maaha mid sumaysan marka la kululeynayo, maxaa yeelay aluminiumka aluminiumku waa shaabad kulul oo si toos ah loogu rogo warqad khafiif ah oo leh aluminium bir ah. Saamaynta ku dhufashada kulul waxay la mid tahay tan biilka qalinka saafiga ah, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo yaqaan been been abuur ah. Sababtoo ah aluminiumku wuxuu leeyahay muuqaal jilicsan, ductility wanaagsan, iyo dhalaalaya lacag-cad, haddii xaashida la duubay lagu dhejiyo warqad dheellitiran oo leh sodium silicate iyo waxyaabo kale si loo sameeyo aluminium alwaax, sidoo kale waa la daabacan karaa. Si kastaba ha noqotee, aluminium aluminium laftiisu way fududahay in la okseysiiyo midabkuna mugdi ayuu noqdaa, midabkuna wuu libdhi doonaa marka la xoqay ama la taabtay, markaa kuma haboona in lagu kululaysto daboolida buugaagta iyo buugaagta xilliyeedka ee keydsan muddo dheer.
Dabcan, maahan oo kaliya faa'iidooyinka muuqda ee warshadaha baakadaha, laakiin sidoo kale waxay leedahay qiimo codsi weyn oo ku saabsan warshadaha kale.
Waqtiga boostada: Oct-31-2020